भान्सा छोएकै निहुमा ९ वर्षीय बालकमाथि निर्मम कुटपिट — Cyber Headline
भान्सा छोएकै निहुमा ९ वर्षीय बालकमाथि निर्मम कुटपिट
April 03, 2017 / Editor CyberHeadline
सुर्खेत, चैत १८ - भान्सा छोएको भन्दै एक दलित बालक निलडाम हुने गरी कुटिएका छन् । बराहताल गाउँपालिका-८ कुनाथरी निवासी कक्षा ३ मा पढ्ने ९ वर्षका बालक भीमबहादुर विकलाई कुनाथरीकै भरत शाही र बाटु शाहीले कुटेको आफन्तले बताएका छन् ।
वार्षिक परीक्षा सकिएकाले विद्यालय विदा थियो । विदाको समयमा उनीहरू घरनजिकै खेल्दै थिए । त्यतिकैमा चक्र शाहीले दौंतरी भीमबहादुर विकलाई आफ्नो घरभित्र टर्च (लाइट) लिन पठाए । साथीको आग्रहलाई नकार्न नसकेपछि भीमबहादुरले घरभित्र छिरेर टर्च ल्याए । त्यसको परिणाम गैरदलितको घरभित्र पसेर भान्सा छोएको आरोपमा उनले बुधबार निर्घात कुटाइ खानुपर्यो ।
पश्चिम सुर्खेतको कुनाथरीस्थित गबेना गाउँका यी दुई बालकबीच कुनै जातीय भेदभाव थिएन । दलित र गैरदलित परिवारमा जन्मिए पनि उनीहरूबीच घनिष्ट मित्रता थियो । भान्सा छुँदा साथीले कुटाइ खानुपर्ला भन्ने सोचेको भए सायद चक्रले आफ्नो घरभित्र पस्न बल गर्ने थिएनन् । तर दलितले भान्सा छोएको भन्दै चक्रका अभिभावकले ९ वर्षीय भीमबहादुर विकलाई निर्घात कुटपिट गरे । कुटपिटबाट गम्भीर घाइते भएका उनलाई उपचारका लागि वीरेन्द्रनगर ल्याइएको छ । भीमबहादुर विकको शरीरभरि नीलडाम छन् । छिमेकीको कुटाइपछि घाइते भएका उनी हिँडडुल गर्न सक्दैनन् ।
स्थानीय बाटु शाही र उनका छोरा भरतले भान्सामा दलितले छोएको भन्दै आफूमाथि कुटपिट गरेको भीमबहादुरले बताए । 'मलाई चक्रले घरभित्र पठायो, बाहिर आउँदा किन भान्सामा छोएको? भन्दै उसका आफन्तले कुटे शरीरको घाउ देखाउँदै उनले भने
'मलाई खोलामा लगेर कुटपिट गरे, बेहोस भएपछि घरमा ल्याएर फालेछन् ।'
जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिन आएकी भिमबहादुरकी आमाले परिवार नै मिलेर आफ्नो छोरामाथि कुटपिट गरिएको बताइन् । जैसराले भनिन्, 'म गोठालो गएकी थिएँ, दिउँसो घरमा आउँदा छोरो थिएन । खोज्दै जाँदा बेहोस अवस्थामा फेला पारेँ, कुटपिट गरेर बेहोस भएपछि उनीहरूले आफ्नै घरभित्र लुकाएछन् ।'
दलितले भान्सा छोएको भन्दै निर्मम ढंगले छोरामाथि कुटपिट गरिएको उनको भनाइ छ । 'आजसम्म मिलेर बसेका थियौं, आफ्नै छिमेकीले यस्तो गर्लान् भन्ने सोचेकी पनि थिइनँ', उनले थपिन्, 'दलित भएकै कारण हामीले कति पीडा सहने? अब दोषीलाई कानुनी कारबाही हुनुपर्छ । गाउँमै मिलाउन खोजेका थिए, म न्याय माग्दै सदरमुकाम आएकी हुँ ।' पीडित बालकका मामा जगदीश विकले जातकै आधारमा आफुहरुमाथि विभेद गरिएको बताए ।
घटनाबारे छानबीन सुरु गरिएको भन्दै प्रहरीले जातीय भेदभाव र छुवाछुत गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । दोषीलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिएर कारबाही थालिने प्रहरीको भनाइ छ । जातीय भेदभाव र छुवाछुत गर्नेलाई २५ हजारसम्म नगद जरिवाना तथा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
April 03, 2017 / Editor CyberHeadline/ Comment
२०५५ साल अघि सिकेको सिपले महिनको ७० ...
भाउजुको हत्याको अभियोगमा ...